राजनैतिक द्धन्द्ध र योजना सम्पन्न गर्नु मुख्य चुनौतीः प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत - Paschimnepal.com
जनप्रतिनिधिहरुकै आन्तरिक द्धन्द्धकै कारण विकास गतिविधि सोचेजस्तो अघि बढ्न नसकेको दैलेखको आठविस नगरपालिकामा असार समान्त आउन डेढ महिना बाँकी रहँदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कुलराज सुवेदीसंग काम गर्दाको समस्या, चुनौती र समाधानका बारेमा पश्चिम नेपाल डटकमले गरेको संक्षित अन्तर्वाताको अंश ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आईपुग्दा आठविस नगरपालिकाको चालु र पुजिगत खर्च कति प्रतिशत भएको छ ?
–मिश्रीत कार्यपालिका भएको यस नगरपालिकामा निरन्तर राजनैतिक द्धन्द्धले गर्दा सन्तोषजनक रुपमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । छोटो समयमा भएको विकास गतिविधि हेर्दा धेरै उपलब्धी मान्नुपर्छ । पुषमा मात्र निति तथा कार्यक्रम पास भएयता कामको गतिविधि बढेको हो । हालसम्म चालु तर्फ झन्डै ५५ प्रतिशत र पुँजिगत तर्फ झण्डै ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । अहिले ठेक्का तथा उपभोक्ता समितिबाट सम्झौता भएका काम तिव्र गतिमा भैरहेको छ ।
बजेट खर्च हुन नसक्नुका मुख्य कारण के हुन् ?
समयमै नीति तथा कार्यक्रम पास नहुनु र राजनैतिक सहमती निर्माण नहुनु यसका कारण हुन् । यसैगरि कर्मचारी प्रभाव अर्को महत्वपूर्ण कारण हो । यहाँ कर्मचारी अभाव छ । सिमिति कर्मचारीले पुरै नगरका योजना हेर्न हम्मेहम्मे छ । अर्को कुरा असार मसान्तमा समग्र बजेट डल्लो रुपमा मात्र पास भयो । तर, बजेटको ब्रेक डाउन भने पुस महिनामा मात्र पास भयो । यसले गर्दा योजना सम्झौता देखी कार्य सम्पन्नसम्म असर पुग्यो । यसैगरि प्राविधिक जनशक्तिको अभवले समयमै इस्टमेन्टहरु तयार पार्न नसक्दा पनि समस्या आयो ।
योजना कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती छन् ?
दुर्गम भएकाले आफैमा चुनौती त छदैछ । त्यसमा पनि यातायातको असुविधा, जटिल भुगोल र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव मुख्य समस्या र चुनौती हुन् । यसैगरि उपभोक्ता समितिमा ईमान्दारिताको कमी छ । विशेष गरि नेताहरुका आसपासका ब्यक्तिहरु उपभोक्ता समितिमा बस्नैपर्ने र गुणस्तरिय काम नगरि प्रभावको आधारमा भुक्तानी माग्ने प्रचलन छ । यी नै चुनौतीका रुपमा देखीएका छन् ।
यस आर्थिक बर्षमा नगरपालिकाका मुख्य योजना र उपलब्धिहरु केके हुन ?
नगरपालिकाले ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाका ९ वडामै लागु गरिएको छ । एक वडामा १५ लाख रुपैँया विनियोजन गरेको छौं । जसको कुल १ करोड ३५ लाख लगानी गरेका छौं । त्यस्तै छात्रवृत्ती कार्यविधि बनाएर डाक्टर, स्टार्फ नर्स र एचए एकएक जना विद्यार्थीलाई पढ्न पठाईएको छ । नगरपालिकाले ७५ प्रतिशत छात्रवित्तिमा अध्यापन गराएको छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ कुल १० किमि नयाँ कच्चि सडक निर्माण भएको छ भने १५ किमि सडकको स्तरोन्ती भएको छ । २ वटा स्वास्थ्य चौकी भवन र ८ वटा विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ । यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १८ जना यूवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास गर्दै छ । नगरपालिकाका सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई ९ दिने गुणस्तर अभिवृद्धि तालिम दिएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्वन्ध कस्तो छ ?
तलनात्मक रुपमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्वन्ध राम्रो छ । तर, बेलामौकामा जनप्रनिनिधिकै विचको द्धन्द्धले कर्मचारी चेपुवामा पर्ने गरेका छन् । तर, पनि दुवै विचको सम्वन्ध राम्रो भएकाले काम गर्न सहज भएको छ ।
नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ?
दुर्गमक्षेत्रको नगरपालिका भएकाले आन्तरिक आम्दानीका श्रोतहरु न्यून छ । यधपी वैशाख समान्तसम्म कुल १६ लाख राजश्व जम्मा भएको छ । जस यस वर्षको लक्षको ७० प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्षदेखी नगरपालिकाले आम्दानी बढाउनका लागि ठोस निति तथा कार्यक्रम बनाउने छ ।
र, अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने छ ?
दुर्गम भेकमा पनि सरकार पुगेर प्रत्यक्ष जनतासंग घुलमिल भएर काम गरेको छ । विकास गतिविधिमा सवैले हातेमालो गरेर सहज रुपमा काम गर्ने बातावरण दिनुपर्छ । अनि मात्र तिव्र विकास हुनेछ । आठविस नगरबासी तथा जिल्लाबासीहरुमा विकास गतिविधिमा चासो दिएर आफ्नो गाउँठाउँमा लाग्न हुन अनुरोध छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ १४, २०७६ 1:28:25 PM
Prevधारिलो हतियार प्रयोग गरी युवकको हत्या
Nextवीरेन्द्रनगरमा टेलिकमको फाइबर टू होम सेवा सुरु